IOS 13 iyo iPadOS waxaad ku isticmaali kartaa kontaroolada PS4 iyo Xbox One | Wararka IPhone
Toni Cortés | | Qalabka IPhone, macruufka 13, iPad, Ciyaaraha IPhone
Iyada oo la adeegsanayo iOS 13 iyo iPadOS waxaan u isticmaali karnaa kontaroolada PS4 iyo Xbox One.
IOS 13, iPadOS, iyo tvOS 13 waxay aakhirka kuu oggolaan doonaan inaad ku ciyaarto a PS4 ama Xbox One kantaroole. Mar dambe iibsan maayo MFI-ga lagu ciyaaro iPhone, iPad, iyo Apple TV.
Uma baahnid mar dambe inaad JAILBAD-ka ka af-jabisid iPad-kaaga si aad ugu ciyaarto Asphalt 8 Airbone oo leh laba il-duuf. Iyadoo cusbooneysiinta cusub ee imaan doonta Sebtembar, Apple wuxuu na siinayaa faahfaahintaan kuwa ugu badan. Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida loo sameeyo.
2 Xbox One maamusha
Hoos u dhig botones PS iyo Share ilaa uu LED-ka hore ka biligleeyo.
Gali nidaamka Bluetooth-ga ee iPhone-kaaga, iPad-ka ama Apple TV-ga oo raadi Maamulaha DualShock 4.
Taabo oo iswaafaji.
Xbox One maamusha
Daar qalabka fog adigoo riixaya Badhanka Xbox.
Hoos u dhig ku xir badhanka xagga hore illaa saddex ilbiriqsi.
Gali dejinta Bluetooth adiga iPhone, iPad ama Apple TV oo raadi xakamaynta Xbox Wireless maamusha.
Mar alla markii aad isku lamaaniso, bilow uun ciyaar kasta oo taageereysa darawalada MFI oo si dhammaystiran ayey kuu shaqeyn doontaa.
Apple ma aysan soo hadal qaadin wax ku saabsan kontoroolayaasha wireless-ka ee kale ee caanka ah sida kuwa ku jira Nintendo Switch. Dhibaatada ma ahan inay noqoto mid farsamo, maxaa yeelay qof kastaa wuxuu adeegsadaa tiknoolajiyada bluetooth, laakiin waa heshiisyo u dhexeeya shirkadaha. Iyadoo la tixgelinayo in dhowr bilood aan horay u arki karno Mario oo wax ka qabanaya aaladaha Apple, waxay umuuqataa inay u badan tahay in kantaroolka sidoo kale la isticmaali karo Nintendo.
Waxay ahayd waqtigii Apple ay bilaabi laheyd inay awood siiso qalabkeeda ciyaaraha. In kasta oo Cupertino ay diidan yihiin mowduuca, iPhone, iPad iyo Apple TV waa qalab aad u fiican oo lagu ciyaaro. Aaladda taxanaha ah ee A-taxanaha ah ee Apple waxay si habsami leh ugu dhaqaajisaa ciyaaraha dhamaadka-sare leh waxqabadka cajiibka ah (ogow inaanan ku qorin liiska iMac…). Waxaan rajeyneynaa bilaha soo socda Apple Store inuu ballaarin doono dalabkiisa oo leh ciyaaro cusub oo awood leh. Iskusoo wada duuboo, loogu talagalay Apple TV.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Sida loogu xiro PS4 ama Xbox One kantaroolaha iOS 13